फोहोरबाट जुठोपूरो छानेर पेट भर्ने केटीलाई मेहनतले बनायो अरबौं डलरको मालिक
ठसक्क बसिरहेर वा दिन आउला नि भनेर पर्खिरहेर पनि कहिँ सफलता प्राप्त होला ? सफलता त्यस्ता मानिसहरुले मात्र पाउँछन्, जो नाभी गाडेरै काममा लाग्छन् । कुनै एउटा चिजमा अलिक राम्रो हुनु सफलताको सुनिश्चितता होइन तर कतिऔं पटकसम्म असफल भएपछि पनि निरन्तर काम गरिरहन पाउनु नै सफलता हो ।
सोफिया अमोरुसोको पनि यस्तै कथा छ । आफ्नो जीवन बचाउनका लागि उनले नौ वर्षको उमेरदेखि नै सानातिना र अनौठा काम गर्न थालिन, यसैले गर्दा आज अमेरिकाकाकै धनीहरुको सूचीमा यिनको पनि नाम समावेश भएको छ । यिनको यो जीवन यात्रा साँच्चै अद्भूत छ । उनले अहिले एउटा ब्राण्ड नैस्टी गैल स्थापित गरेकी छन् । यो ब्राण्ड सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने खालको कम्पनी बनिसकेको छ ।
सोफियाको जन्म १९८४ मा क्यालिफोर्नियाको सन डिएगोमा भएको हो । सोफियालाई डिप्रेसन र अटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभिटी डिस अर्डर भनिने रोग लागेको छ भन्ने थाहा भएपछि उनले विवशतावश स्कूल छोड्नु प¥यो र घरमै उनलाई पढाउन दिन थालियो । उनका आमाबुवाको पनि जागिर खुस्किएपछि त परिस्थिति अझै खराब हुन पुग्यो ।
नौ वर्षको कलिलो उमेरमा उनले आफैं लेमोनेड (कागती निचोरेर बनाइएको सर्वत) बिक्री गर्ने पसल खोलिन् । सोफियाले २२ वर्षको होउन्जेलसम्ममा लगभग १० वटा फरक खालका जागिर खाइसकेकी थिइन ।
युवा वयकी केटी सोफियाले घुमन्ते आदिवासीको जस्तो जीवन जीउन थालिन् । अमेरिकाको पश्चिमी तटमा कहिले यता कहिले उता भुलिँदै चोरी समेत गरिन् । चोरी गर्ने क्रममा एक पटक पक्राउ परेपछि उनलाई जरिवाना तिराइयो । त्यसपछि भने उनले यो खालको जीवनशैली त्यागिदिइन् । अब उनी सन्फ्रान्सिस्को गइन र त्यहाँको कलेजमा आफ्नो भाग्य परीक्षण गर्न थालिन् ।
यसैताका सोफियाले ई–बे मा एउटा अनलाइन स्टोर खोलिन् र त्यसको नाम ‘‘नैस्टी गैल विन्टेज’’ राखिन् । यो नाम पप गायक बेटी डेबिसले सन् १९७५ मा निकालेको एलबममा आधारित थियो ।
सोफिया च्यारिटी सप्स (परोपकारका लागि खोलिएका दोकान) मा गएर राम्रो लागेका कपडा छानेर ल्याउँथिन् र उच्च मूल्यमा बिक्री गर्थिन् । एउटा च्यानल ज्याकट जुन जम्मा जम्मी ५१५ रुपियाँमा खरिद गरेकी थिइन्, त्यसलाई ६४३९५ रुपियाँमा बिक्री गरिन् । सोफियाले कपडा ल्याएपछि छुट्टै शैली (स्टाइल) मा परिमार्जन गर्थिन । त्यसको फोटो खिचेर आकर्षक क्याप्सन सहित ग्राहकका घरमा पुर्‍याउन पनि भ्याउँथिन । केही समय अघि कुनै बेला लिएको फोटोग्राफी कक्षामा सिकेको सीप उनका लागि उधुमै काम लागेको थियो ।
नैस्टी गैल विशेष गरी युवा महिलाका लागि विन्टेज क्लोथ (विशेष शैलीका लुगा) बेच्ने लोकप्रिय ब्रान्ड बनिसकेको थियो । सोफियाले आफ्नो फेसन ब्राण्डको प्रचारप्रसारका लागि ‘माइ स्पेश’ र पछि ‘फेसबुक’ लगायतका मञ्चलाई साँच्चै राम्रोसँग उपयोग गरिन् ।
ई–बेले सन् २००८ (वि.सं. २०६४) मा आफ्नो ब्राण्डलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आरोप लगाउँदै नैस्टी गैल को खाता रोक्का गरिदियो । पाँच वर्षसम्म गरेको सबै मेहनत नासिए झैं भएको थियो तर सोफियाले समय खेर नफाली आफ्नो ब्रान्डलाई ई–बेबाट निकालेर छुट्टै स्टोर खोल्ने निर्णय गरिन् ।
आफ्ना कर्मचारीको सहयोगमा लस एन्जेलसमा आफ्नै ‘रिटेल स्टोर’ खोलिन् । त्यो स्टोर खोल्नु अघि नै कमाएको ख्यातिका कारण धेरै लगानीकर्ताले उनीसँग सम्पर्क गर्न थाले । सोफियाले हेर्दा हेर्दै ३१५ करोड रुपियाँ बजारबाट उठाइन् । त्यसबेलासम्म उनको कम्पनीको मूल्य १८०० करोड पुगिसकेको थियो र सोफियाको नाम फोब्र्स म्यागेजिन २०१२ मा धनी महिलाहरुको सूचीमा समावेश भइसकेको थियो ।
व्यापारमा सफलता पाउनुका अतिरिक्त सोफियाले महिला उद्यमीको बारेमा प्रचलित गलत अवधारणालाई जरैदेखि उखेलिन् । महिलाहरुको फेसनका क्षेमा सफलताको नयाँ कीर्तिमान रच्तै सोफिया आधुनिक नारिवादको ज्वाला बोक्ने महिला बन्न पुगिन् ।
महत्वाकांक्षी र साहसी महिलाहरुले प्राप्त गर्ने उपलब्धिप्रति आँखीभौँ खुम्च्याउने अवधारणा र परिभाषा निमिट्यान्न हुने गरी मेट्न युवा महिलाहरुलाई प्रोत्साहित गरिन् । वि.सं. २०७४ बैशाख ८ गते (तदनुसार २१ अप्रिल २०१७) बाट ‘नेटफ्लिक्स’मा प्रशारण गरिएको शृङ्खला ‘गर्ल बोस’मा उनकै कथा चित्रण गरिएको छ ।
सोफियाले कुनै पनि मानिससँग भएको उत्सुकता र महत्वाकांक्षाले उसँग निहित डरलाई जितेपछि आफैंमा परिपूर्ण नहुँदानहुँदै पनि सफलताको चुचुरो/शिखर आरोहण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वलाई देखाइन । हार नमानी सफल भएरै छाड्छु भन्ने दृढ सङ्कल्पले नै विश्वका एक प्रतिशत मानिसलाई अन्य सर्वसाधारणभन्दा फरक ठाउँमा उभ्याउँछ ।
(केनफोलिओजको सहयोगमा टिएन घिमिरेद्वारा अनूदित)